1766-L32BWA CPU - Akụkọ - HuiTong Mmeputa Mbubata na Mbupụ Azụmaahịa Co., Ltd.
.Lọ > Akụkọ > Akụkọ
MicroLogix 1400 njikwa na-programmedusing a * ọhụrụ version RSLogix 500 na mbụ na klas mmemme software, na theMicroLogix na SLC 500 ezinụlọ ịmụta n'otu mmemme ntuziaka. RSLogix500Starter (Mbipụta isi), Standard (mbipụta ọkọlọtọ) na Ọkachamara (mbipụta ọkachamara) yana ngwanrọ RSLogix Micro niile na-akwado njikwa MicroLogix1400, gụnyere ọrụ ntanetị.
onye ọ bụla na-ahụ anya nwere ọdụ ụgbọ mmiri 2, na-akwado DF1 / DH485 / Modbus RTU / DNP3 / ASCIIprotocol, ọdụ ụgbọ ethernet wuru, na-akwado ozi mgbasa ozi EtherNet / IP.
Uru nke MicroLogix 1400 Njikwa
Oghere nchekwa 0Lgege (mmemme onye ọrụ 10 KB na data njirimara 10) nwere ike mejupụta ntinye nke ọtụtụ ngwa.
0Real online edezi mma na-agbanwe omume na online, tinyere PID, na-enweghị offline.
0RSLogix Micro na RSLogix 50RSLogix Micro0RSLogix Micro Professional (Ọkachamara Ọkachamara), Ọkpụkpụ (Nhazi Ọkpụzi)
Ihe ngosi 0Starter (Ntughari Ntuta) Software 8.1 andlater na-akwado edezi ntanetị nke MicroLogix 140Starter (0Starter (njikwa).
0Switch n'etiti usoro ọsọ / dịpụrụ adịpụ / mmemme site na keyboard LCD.
0 Data ndekọ ọrụ dabere na oge orevent, ịnara timestamp. A na-echekwa data njikwa na oghere 128 Kstorage dị iche iche maka nyocha (dịka ọmụmaatụ na ntanetị na data I / O na mkpu).
Storelọ nchekwa nhazi A0 (ihe ruru 64 KB nke nchekwa dị na oghere nchekwa data) nwere ike ị nweta ya site na eserese ladder, nke nwere ike ịgbanwe tebụl, counter na ụdị data ụdị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
0High arụmọrụ nhọrọ M / O nwere ndọtị, (ihe ruru 16 I / O modulu nke nwere ike ịnwe ikpe akwadoghị).
Enwere ike iji ntanetị elu ngwa ngwa elektrik00 (ewezuga ihe 1766-L32AWA na 1766- L32AWAA) dị iche iche dị ka ntinye mkpọchi (njide ihe).
Ntinye akalog analogga 0-10 V DC nke afọ abụọ (maka ndị na-ahazi ya analog I / O analog) nwere mkpebi 12-bit (anaghị ndị dịpụrụ adịpụ).
Enwere ike ịhazi nghazi atọ dị ọsọ dịka 100 kHz usoro mmepụta usoro (PTO) dị 40 kHz.
usu obosara mgbanwe olu (PWM) mmepụta (directorynumbers 1766- L32BXB na 1766- L32BXBA naanị).
Nsonye ihe ntanetị na ntinye nke ọtụtụ ihe0 na-eweta, nke na-enye ohere maka imejupụta ma nwekwaa usoro ntinye ahụ, ebe ị na-enye njedebe dịpụrụ adịpụ maka ngwaọrụ ntinye otutu ọkwa.
Oge nhọta 0One ms (STI).
Ngụ oge mkpebi 0High, izizi 1 ms.
Ọwa nkwukọrịta 0 na-enye ndakọrịta elektrik RS-232 ma ọ bụ RS-485 (nke ahọpụtara site na Communcable).
0RS-232 ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado usoro iwu serial niile.
Site na ọdụ ụgbọ mmiri RS-485, ịnwere ike iduzilya-DH-485ã €DF1 semi-duplex Master / ohu, ASCII.
0Modbus RTU network / network. theaccess DNP ohu network eji 1763- NC akakabarede interface (dịghị 1761-NET-AIC akakabarede interface na-chọrọ).
Ọwa ozi0 ahụ nwere ọdụ RJ45 arụnyere na-akwadoEtherNet / IP maka ịnyefe ozi ndị ọgbọ. Ihe 10/100 Mbpsports na-akwado BOOTP na DHCP ..
Nkwukọrịta Nkwukọrịta 2 bụ 9-pin, RS-232 serial ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado usoro nkwukọrịta okwu niile.
Igwe ọkụ ịgbanwee agwa0 na-enye ọwa njikwa 0 ọdụ ụgbọ mmiri ka ịgbanwee paramita nkwukọrịta nke onye ọrụ na ntọala ntọala nrụpụta, na-agbanwe n'ụzọ dị mfe site na usoro Probus RTU ma ọ bụ ASCII (enweghị mmemme mmemme) gaa na usoro profaịlụ zuru oke nke DF1 (maka nbudata / nbudata, nlele ma ọ bụ ihe ndezi edezi). Yabụ ọ bụrụgaghị akọwapụta nkwukọrịta nke onye njikwa ahụ nke ọma, kọmputa mmemme nwere ike ijikọ njikwa ahụ.
Ọdịiche dị na Starter soft soft na inverter